वैज्ञानिकहरुले पानीबाट बनाए सुन ! - Jhapa Online
दान पनि को‌च्याउने‌–घिचाउने‌ कुर‌ा हुन्छ ?
बिर्तामोडका ३५ अपांगता भएका परिवालाई राहत
मतिभ्रष्ट ने‌तागणः शीघ्र निकास अपरि‌हार्य
दमकमा पाँच सय शैयाको‌ भृकुटी अस्पताल बन्दै‌
प्राचीन कालदेखि नै धातुहरु तथा रसायनहरुको मिश्रणबाट सुन बनाउने धेरै प्रयासहरु भएका छन् । विभिन्न अन्य धातुबाट सुन बनाउने यस्तो विधिलाई अल्केमी अर्थात् रस विधा भनिन्छ । वैज्ञानिकहरुले अन्ततः यो विधामा पहिलो सफलता प्राप्त गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले पानीबाटै पहिलोपटक सुन बनाउन सफल भएका छन् ।
चेक गणतन्त्रको राजधानी प्रागस्थित चेक एकेडेमी अफ साइन्सेसका भौतिक रसायनविद‌्हरुले क्षारीय धातुको सहयोगमा यसरी पानीलाई सुनौलो चम्किलो धातुमा बदलेका हुन् ।
पानीमा ४८ मेगाबार चाप दिँदा पनि यस्तै हुन्छ । तर यसो गर्नु प्रयोगशाला प्रविधिमा सम्भव छैन । त्यसैले शोधकर्ताहरुले इलेक्ट्रोन सहभागिताका लागि क्षारीय धातुको प्रयोग गरे । एजेन्सीको सहयोगमा
जहाँ राखिएको छ ६० लाख मानिसको कंकाल
संसारको सबैभन्दा सुन्दर लामखुट्टे
क्षणभरमा दुई लिटर सोडापानी पिएर विश्व कीर्तिमान
मानिसले चुम्बन गर्न सुरु गर्नुका कारण
यो हो गिनिज बुकमा नाम लेखाउने सुँगुर